ကိုယ်တို့အကြောင်း - မိုးလုံလေလုံပြင်ပတွင် ဦး ဆောင်ဗီဒီယို display မျက်နှာပြင်ထုတ်လုပ်သူ
စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည် 2006, Shenzhen Hyte-Led Co. ,, ltd သည်တရုတ်နိုင်ငံတွင် ဦး ဆောင်နေသည့် LED Display ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်; ထက်ပိုပြီးနှင့် 10000 စတုရန်းမီတာထုတ်လုပ်မှုandရိယာနှင့် 15 အလိုအလျောက်ထုတ်လုပ်မှုပစ္စည်းကိရိယာများ၏လိုင်းများ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်ဂုဏ်ယူပါတယ်, R ကို&: D, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ခိုင်ခံ့သောဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့များ.
အစွမ်းထက်အဆင့်မြင့်နည်းပညာလုပ်ငန်းတစ်ခုအဖြစ်, Hyte-Led သည် Nicha ကဲ့သို့သောကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းကုမ္ပဏီကြီးများနှင့်ရေရှည်ပူးပေါင်းမှုကိုထူထောင်ခဲ့သည်, ခရီး, ထိရောက်သောအရင်းအမြစ်များမျှဝေခြင်း၏ခေတ်မီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုအပြည့်အဝကိုယ်စားပြုသည့် epistar နှင့် Optotech ကော်ပိုရေးရှင်း, ကောင်းစွာ - ပတ်ပတ်လည်ပါဝင်မှု & နှင့်မြင့်မားသော - ထိရောက်မှုစစ်ဆင်ရေး. ကျွန်ုပ်တို့သည်နှစ်ပေါင်းများစွာအားကစားကွင်းပြသခြင်းများအပါအ ၀ င် LED display ထုတ်ကုန်များစွာကိုတည်ဆောက်ခဲ့သည်, စီးပွားဖြစ်ကြော်ငြာပြသ, ပုံသေဖော်ပြချက်များ, ဒါကြောင့်အပေါ်အိမ်တွင်းနှင့်အပြင်ဘက်အသုံးပြုမှုများအတွက်ငှားရမ်း display များနှင့်.
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကိုကြော်ငြာလုပ်ငန်းများတွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုကြသည်, အများပြည်သူဆိုင်ရာအဆောက်အ ဦ, အားကစား, ဖျော်ဖြေရေးနှင့်အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများ, နှင့်ဥရောပတင်ပို့ခဲ့ကြသည်, အမေရိက, ဂျပန်, ဗြိတိန်, ရုရှား, ထက်ပိုပြီး 50 နိုင်ငံများနှင့်တိုင်းဒေသကြီးများ. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာထူထောင်ပြီးပြည့်စုံသောရောင်းအားနှင့်ဝန်ဆောင်မှုကွန်ယက်နှင့်အတူ,ကျွန်ုပ်တို့ထံမှဝယ်ယူသောဖောက်သည်များထံမှမကြာခဏရည်ညွှန်းမှုများရပြီးမီဒီယာကဏ္imediaကြော်ငြာအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏စီမံကိန်းမြောက်မြားစွာနှင့် ဦး ဆောင်သောဗီဒီယိုလုပ်ငန်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့လည်းပါ ၀ င်ခဲ့သည်။.
လက်မှုပစ္စည်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီ၏အဓိကကျသည်. တာရှည်ခံကြိုးများဖန်တီးရန်ကျွန်ုပ်တို့၌ရှိသည့်စိတ်အားထက်သန်မှုကိုဖော်ပြရန်မိမိကိုယ်ကိုလက်မှုပညာရှင်များဟုခေါ်သည်, ကျနော်တို့ကအမြဲတမ်းကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုတိုးတက်အောင်နေကြသည်, မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းအောင်မြင်ရန်သင်၏စီမံကိန်းကိုတွန်းအားပေးခြင်း.
ထိရောက်သောစက်ရုံ & State-Of-Art စက်ယန္တရား
နောက်ဆုံးပေါ်အရည်အသွေးမြင့်စက်သည်တောက်ပ။ တည်ငြိမ်ဆုံးသော ဦး ဆောင်မျက်နှာပြင်ထုတ်ကုန်များကိုမည်ကဲ့သို့ဆောင်ကျဉ်းပေးနိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့နားလည်ပါသည်.ကျွန်ုပ်တို့၏နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအားအပြိုင်အဆိုင်စျေးနှုန်းပေးနိုင်သည်ကိုသေချာစေသည်.4အလိုအလျောက်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများသည်အရည်အသွေးတူသောထုတ်ကုန်ကိုထိန်းသိမ်းစဉ်ပိုမိုမြင့်မားသောထုတ်လုပ်မှုကိုရရှိရန်ခွင့်ပြုသည်.
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များပြproblemsနာမရှိဘဲသင်လက်ခံသည့်အခါသေချာစေရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ LED ဖန်သားပြင်ထုတ်ကုန်များကိုစစ်ဆေးရန်အပိုင်းသုံးပိုင်းရှိသည်. 1) 24 ကျနော်တို့ LED module တစ်ခု၏ SMT ဖြစ်စဉ်ကိုပြီးဆုံးသည့်အခါနာရီ. 2) ပထမ ဦး ဆုံးအပြည့်စုံစုဝေး LED ကက်ဘိနက်အလင်းနှင့်အိုမင်းစမ်းသပ်မှု; 3) 48 ဗီဒီယိုများကြည့်ခြင်းဖြင့်အပြည့်အဝဆောက်လုပ်ထားသော LED မျက်နှာပြင်အိုမင်းခြင်းအတွက်နာရီ, တစ်ခုတည်းသောအရောင် carousel.